Saldhig Shabaab oo la Duqeeyay & Khasaare Weyn oo soo gaaray - Xogta Keydmedia | KEYDMEDIA ONLINE
Saldhig Shabaab oo la Duqeeyay & Khasaare Weyn oo soo gaaray - Xogta Keydmedia
Kismaayo (Keydmedia) - Galabta markii ay saacadu ahayd 3:30 PM xiliga Soomaaliya waxaa duleedka degmada Afmadow ee Gobbolka Jubbada Hoose ka dhacday duqeyn ay geysteen Diyaarado dagaal kuwaasoo duqeyn xoogan u geystay Fariisin Ciidan oo ay Kooxda Shabaabku ay ku leeyihiin dhulka loo yaqaano Raamo-Gudaa.
Dhulka Raamo-Gudaa ayaa ah dhul Geedo badan oo ay Shabaabku ku leeyihiin Saldhigyo Ciidan oo Qarsoodi ah, waxaana Deegaanka la duqeeyay uu masaafo dhan 25km u jiraa degmada Afmadow.
Inkastoo Saldhiga la weeraray uu ku yaalo dhul howd ah oo ay aad u adagtahay Isgaarsiinta ayaa hada waxaa soo baxaya Warar kala duwan oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay Duqeyntaasi.
Xariiro kala duwan oo ay Keyedmedia sameysay ayaa waxaa ay wararku sheegayaan in tirada dhimashada ee ka dhalatay duqeynta ay gaarayso ilaa Sadex Sargaal oo sar sare oo kooxda Shabaabka ka tirsanaa.
Saraakiisha Duqeynta Galabta ku geeriyootay waxaa ku jiray Nin Magaciisa naloogu soo gaabiyay "Sheekh Khaalid" oo horay u ahaan jiray Gudoomiyaha degmada Salagle ee Gobbolka Jubbada Dhexe, kaasoo la sheegay in jirkiisa uu si xun u goo go'ay.
Waxaa sidoo kale jira Saraakiil badan oo ay dhaawacyo Cul-culus ka soo gaareen Duqeynta Galabta dhacday kuwaasoo la sheegay in loola cararay dhanka Magaalada Kismaayo
Sidoo kale Duqeyntaasi ku bur buray Baabuur badan oo kuwa Dagaalka ah kuwaasoo yaalay Saldhiga Shabaabka ee ku yaalo duleedka degmada Afmadow, waxaana tirada baabuurta bur burtay ay dhantay ilaa 10 baabuurta dagaalka ah.
Wixii ku soo kordha Arintaan, ka Aqriso Keydmedia.net